Tinofanira Kurambana Here?—Chikamu 1 | Vechiduku Vanobvunza Kuti
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga (Malawi) Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hungarian Iban Icelandic Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kyangonde Latvian Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mutauro Wemasaini wokuBrazil Myanmar Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sunda Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Telugu Thai Tsonga Turkish Turkmen Twi Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Tinofanira Kurambana Here?—Chikamu 1
Dzimwe nguva zvakanaka kuti murambane. Chimbofunga zvakaitika kuna Jill. Anoti, “Pakutanga zvaindifadza kuziva kuti mukomana wangu aigara achinetseka kuti ndinenge ndiri kupi, ndiri kuitei uye ndinaani. Asi izvi zvakasvika pakuti akanga asingadi kuti ndipedze nguva nomumwe munhu asiri iye. Aitondiitira shanje pandaipedza nguva ndiine mhuri yedu—zvikurukuru ndiina baba vangu. Pandakamuramba, ndakanzwa ndarerukirwa zvikuru!”
Zvakada kufanana nezvakaitikawo kuna Sarah. Akatanga kucherechedza kuti John, mumwe mukomana waaifambidzana naye aitsvinya, ainyanya kurayira, uye akanga asina unhu. Sarah anoyeuka kuti, “Pane imwe nguva akanonoka kuuya kuzonditora kumba kwedu nemaawa matatu! Amai vangu pavakavhura dhoo haana kutaura navo, uye akabva angoti: ‘Hande. Tanonoka.’ Panzvimbo pokuti ati ‘Ndanonoka’ akati ‘Tanonoka.’ Aifanira kunge akakumbira ruregerero kana kuti kutsanangura kuti sei akanga anonoka. Chinhu chikuru ndechokuti aifanira kuremekedza amai vangu!”
Asi hazvirevi hazvo kuti kana munhu akangokanganisa kamwe chete mobva matogumisa kuti hapana kuri kuenda rudo rwedu. (Pisarema 130:3) Asi Sarah akazosarudza kumuramba nemhaka yekuti akaona kuti zvakaitwa naJohn ndiwo akanga achitori magariro ake.
Sezvakaonekwa naJill naSarah, zvakadini kana ukaona kuti munhu wauri kufambidzana naye haana kukodzera kuti uzoroorana naye? Kana zvakadaro, usamanikidza zvinhu zvinenge zvisingaiti! Kunyange zvazvo zvakaoma kuzviita, zvingava zvakanaka kuti murambane. Zvirevo 22:3 inoti: “Munhu ane njere anoona dambudziko ovanda.”
Chokwadi, kurambana kungasava nyore. Asi kana maroorana muchagara mose kweupenyu hwose. Zviri nani kurwadziwa kwenguva pfupi pane kuzozvidemba kwoupenyu hwose!
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Tinofanira Kurambana Here?—Chikamu 1
ijwyp nyaya 20